WhatsApp Archives - Mobiles Khabar
१७ जेष्ठ २०७५, बिहीबार १२:४७ Comments Off on योग गुरु रामदेवको कम्पनीले ल्यायो मेसेजिंग एप, ह्वाट्सएपलाई टक्कर दिने योजना
काठमाडौं । भारतीय योग गुरु रामदेवको कम्पनीले पछिल्लो दिनहरुमा टेलीकम सेक्टरमा नयाँ नयाँ सेवाहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् । हालै रामेदवको कम्पनी पतंजलिले नयाँ मेसेजिंग एप सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले भारतीय माझ लोकप्रिय रहेको ह्वाट्सएपलाई सिधै टक्कर दिने योजनासाथ नयाँ मेसेजिंग एप किम्भो (Kimbho) सार्वजनिक गरेको हो । करिब २२ एमबीको यो एप हाल गूगल प्ले स्टोरमा डाउनलोडका लागि उपलब्ध ...
१ मंसिर २०७३, बुधबार १७:२३ Comments Off on ह्वाट्सएपमा अब भिडियो कलिंग सुविधा
काठमाडौं, १ मंसिर । इन्स्ट्यान्ट म्यासेजिङ प्लेटफर्म ह्वाट्सएपले (WhatsApp) नयाँ फिचर थप गरेको छ । फेसबुकको स्वामित्वमा रहेको ह्वाट्सएपमा अब फेसबुक र स्काइपमा जस्तै भिडियो कल गर्न सकिने फिचर उपलब्ध भएकाेछ । यो फिचर एन्ड्रोयड, आईओएस, तथा विण्डोजका फोनहरुमा प्रयोग गर्न सकिनेछ । तर हाल यो सुविधा भने सबैको लागि उपलब्ध भईसकेको छैन् । कम्पनीले आउने दिनहरुमा १० करोड भन्दा ...
२१ कार्तिक २०७३, आईतवार १८:१६ Comments Off on ह्वाट्सएप डिसेम्बर ३१ तारिखदेखि यी स्मार्टफोनमा प्रयोग गर्न नमिल्ने
काठमाडौं, २१ कात्तिक । म्यासेजिंग एप ह्वाट्सएपले (WhatsApp) पुराना डिभाइसहरुमा यहि डिसेम्बर ३१ तारिखदेखि आफ्नो एप प्रयोग गर्न नसकिने गरि परिवर्तन गर्न लागेको छ । कम्पनीले विश्व बजारबाट हाल निकै कम मात्र प्रयोग हुने तथा हराईसकेका भर्सनका डिभाइसहरुमा यहि डिसेम्बर ३१ तारिखदेखि ह्वाट्सएप प्रयोग गर्न नसकिने जानकारी दिएको छ । कम्पनीले नोकिया, ब्ल्याकबेरी, विण्डोजसहित एन्ड्रोयडका केहि फोनहरुमा पनि ह्वाट्सएप आगामी ...
२४ चैत्र २०७२, बुधबार १५:३९ Comments Off on ह्वाट्सएपका सबै म्यासेजहरु अब पूर्ण गोप्य, सबै प्रयोगकर्तामा ‘इन्ड-टू-इन्ड’ इन्क्रिप्सन लागू
काठमाडौं, २४ चैत । विश्वको लोकप्रिय म्यासेजिंग एप ह्वाट्सएप (WhatsApp) का संदेशहरु अब कसैले ह्याक गर्न नसक्ने भएको छ । ह्वाट्सएपले सेक्यूरिटि प्रोजेक्टअन्तरगत पूर्णरुपमा इन्ड टू इन्ड इन्क्रीप्सन (end-to-end encryption) लागू गरेको छ । ह्वाट्सएपले करिब डेढ वर्षलगायतका तयार पारेको सेक्यूरिटि प्रोजक्टअन्तरतगको पूर्णरुपको इन्क्रीप्सन आफ्ना सबै सेवा प्रयोगकर्तालाई उपलब्ध हुने जानकारी दिएको छ । यसको अर्थ अब ह्वाट्सएपको सबैभन्दा पछिल्लो ...
५ माघ २०७२, मंगलवार १७:०६ Comments Off on अब ह्वाट्सएप निशुल्क प्रयोग गर्न सकिने, भिडियो कलिंग सहितको फीचर राखिँदै
काठमाडौं, ५ माघ । मोबाईल म्यासेजिंग सर्भिस एप ह्वाटसएपले आफ्नो वार्षिक सब्सक्रिप्सन फीको प्राबधान हटाएको छ । ह्वाटसएपको सेवा पहिलो वर्ष प्रयोगकर्ताहरु सबैको लागि निशुल्क भएपनि त्यसपछिका वर्षहरुमा कम्पनीले रकम लिने गर्दथ्यो । कम्पनीले दोस्रो वर्षदेखि प्रयोगकर्ताहरुसँग वार्षिकरुपमा करिब १ डलर लिने गर्दथ्यो । तर अबदेखि त्यो वार्षिक शुल्क नलिने ह्वाट्सएपको ब्लगमार्फत जानकारी दिएको छ । फेसबुक इंकले कम्पनीको आफ्नो ...
ह्वाट्सएपमा फुर्सदमा म्यासेज हेर्न सकिने सुविधासहितको फीचर
२२ कार्तिक २०७२, आईतवार ११:३७ Comments Off on ह्वाट्सएपमा फुर्सदमा म्यासेज हेर्न सकिने सुविधासहितको फीचर
काठमाडौं, २० कात्तिक । च्याटिंग एप ह्वाट्स एपले प्रयोगकर्ताको लागि नयाँ फीचर्स अपडेट गरेको छ । कम्पनीले थप गरेको नयाँ फीचरले प्रयोगकर्ताले कुनै पनि म्यासेजलाई पछि पनि पढ्न सकिन्छ । यो फीचरले कुनै पनि म्यासेजलाई बुकमार्क(Bookmark) गरेर पछि हेर्न सकिनेछ । प्रयोगकर्ताले आफूले चाहेको म्यासेजलाई स्टार लगाएर बुकमार्क गर्ने फीचर ह्वाट्सएपमा थप गरिएको हो । यो फीचर अहिले एन्ड्रोयड यूजर्सका ...
ह्वाट्सएपको वेब भर्सनमा सुरक्षा कमजोरी, ह्याकरले कम्प्यूटर ह्याक गर्न सक्ने
२८ भाद्र २०७२, सोमबार ०७:४२ Comments Off on ह्वाट्सएपको वेब भर्सनमा सुरक्षा कमजोरी, ह्याकरले कम्प्यूटर ह्याक गर्न सक्ने
काठमाडौं, २८ भदौ । के तपाई च्याट तथा म्यासेजको लागि ह्वाट्सएप (WhatsApp) प्रयोग गर्नुहुन्छ ? गर्नुहुन्छ भने होसियार तपाईँको डाटा ह्याकरले ह्याक गरेर प्रयोग गर्न सक्दछ । अहिले ह्वाट्सएपले वेब भर्सनको सुविधा आफ्ना यूजर्सलाई उपलब्ध गराएको छ । ह्वाट्सएप प्रयोगकर्ताले आफ्नो स्मार्टफोन र पर्सनल कम्प्यूटरमा भएको ह्वाट्सएपमा विभिन्न फाइलहरु आदान प्रदान गर्ने गर्दछन् । ह्वाट्सएप वेबमा एक सेक्यूरिटी बग भेटिएको ...
आईफोन प्रयोगकर्ताका लागि ह्वाट्सएपको वेब भर्सन आयो
३ भाद्र २०७२, बिहीबार ०८:१९ Comments Off on आईफोन प्रयोगकर्ताका लागि ह्वाट्सएपको वेब भर्सन आयो
काठमाडौं, ३ भदौ । च्याटिंग एपको रुपमा परिचित ह्वाट्सएप (WhatsApp) ले आइफोन यूजर्सका लागि वेब भर्सन सार्वजनिक गरेको छ । एन्ड्रोयड यूजर्सका लागि वेब भर्सन कम्पनीले आठ महिना पहिले नै सार्वजनिक गरेपनि आईफोन प्रयोगकर्ताका लागि ह्वाटस्एपको वेब भर्सन भने भर्खर मात्र सार्वजनिक गरिएको हो । अब आइफोन प्रयोगकर्ताहरुले आफ्नो एकाउन्ट तथा च्याट ह्वाट्सएपको वेब भर्सनमा सिंक्रोनाइज गर्न पाउने छन् । ...
ह्वाट्सएपले आईओएस प्रयोगकर्ताका लागि शुरु गर्यो नयाँ फीचर
९ बैशाख २०७२, बुधबार १३:०५ Comments Off on ह्वाट्सएपले आईओएस प्रयोगकर्ताका लागि शुरु गर्यो नयाँ फीचर
काठमाडौं, ९ वैशाख । इन्टान्ट म्यासेजिंग एप ह्वाट्सएपले एन्ड्रोयडपछि अब आईओएस (iOS) का लागि पनि भ्वाइस कलिंग फीचर अपडेट गर्न शुरु गरेको छ । केहि समय अघि ह्वाट्सएपले यो फीचर एन्ड्रोयडका सबै प्रयोगकर्ताहरुका लागि शुरु गरिसकेको थियो । अब यो सबै एन्ड्रोयड डिभाइससम्म पुगीसकेको छ । एन्ड्रोयडपछि अब ह्वाट्सएपले आईओएसको लागि कलिंग फीचर रोल आउट गर्न शुरु गरेको हो । ...
६ बैशाख २०७२, आईतवार १३:४६ Comments Off on ह्वाट्सएपमा नयाँ फीचर, गूगल ड्राइभमा च्याट सेभ हुने
काठमाडौं, ६ वैशाख । ह्वाट्सएपले प्रयोगकर्ताको लागि म्यासेजिंग एपलाई अपडेट गरेको छ । ह्वाट्सएपमा एक नयाँ फीचर जोडिएको छ । यो फीचरको सहयोगद्धारा यूजर्सले आफ्नो कुराकानीलाई कन्भर्शेसनलाई गूगल ड्राइभमा सेभ गर्न सकिन्छ । ह्वाट्सएपमा अफलाइन कन्भर्सेशन ब्याकअपको अप्शन पहिलेदेखि नै छ तर अनलाइन कन्भर्सेशनका अप्शन यूजर्सका लागि ज्यादा सुविधाजनक हुनेछ । यो अपडेट ह्वाट्सएपको लेटेस्ट भर्सन भी२. १२. ४५ (V2.12.45) ...